UKUQHUTYELWA KWEZEMPUMELELO KWE-SHELL & TUBE HEAT EXCHANGER TO HEC |
Ekuqaleni kukaJan 2021, uShuangliang Eco-Energy uhambise ngempumelelo iiyunithi ezimbini zeCycle Gas Coolers ezivela kumzi-mveliso, egqibezela isithembiso sokuhambisa kumthengi: HEC (IHyundai Engineering Co, Ltd.), ongoyena mkhulu wehlabathi Ii-EPCs zekomkhulu labo eKorea kunye nokukhuthaza ishishini labo kwihlabathi liphela.
Esi sisivumelwano sokuqala phakathi kweShuangliang kunye ne-HEC yeshishini le-Shell & Tube Heat Exchanger emva kokuba uShuangliang ngokusemthethweni enguMthengisi oVunyiweyo we-HEC oqala ngo-2018. Umsebenzisi wokugqibela ngumzi mveliso we-petro-chemical ePoland. Ngenxa yobhubhane we-COVID-19 ukuqala kwasekuqaleni kuka-2020, uShuangliang walibaziseka kwiinyanga ezimbini kwishedyuli yemveliso njengoko abathengisi abangaphantsi bengenakuqala imveliso yabo iinyanga ubuncinci. Nangona kunjalo, ukuze kuzalisekiswe umhla wokuhanjiswa othenjisiweyo, uShuangliang wenza kwaye waqhuba isicwangciso sokubambisa ngazo zonke iindleko, ekugqibeleni esenza isithembiso sethu kumthengi, oneliseke ngakumbi ngumthamo weSuangliang wokuvelisa ngobuchwephesha nangokucwangcisiweyo.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, u-Shuangliang wenze amanyathelo amakhulu kukwahluka kweemveliso kwishishini lamanye amazwe, kubandakanya i-S & T Heat Exchanger, i-Air-Cooled Condenser, i-Boiler kunye ne-Pressure Vessel, njl njl. ifuzisela ukuba iS & T yoTshintshiselwano ngobushushu eShuangliang yamkelwe ziinkampani ezikumgangatho ophezulu we-EPC kunye nabathengi baseYurophu. Silindele ukwanda kwimarike yaphesheya kwiimveliso ezahlukeneyo zeShuangliang.